2021 Midabka Musqusha oo leh, Nabad ku dheh Bilicsiga "Dhulka", Gurigaaga "Midab" ha Kordho!
Bogga ugu weyn / blog / 2021 Midabka Musqusha oo leh, Nabad ku dheh bilicsanaanta "Caadiga ah", Gurigaaga “Midab” ha u soo baxo
2021 Midabka Musqusha oo leh, Nabad ku dheh bilicsanaanta "Caadiga ah", Gurigaaga “Midab” ha u soo baxo
2021 / 03 / 29 Qoondayntablog 3286 0
Xiao Xin Headlines Musqusha
Qurxinta muuqaal ahaaneed ee ugu muhiimsan ee musqusha laga soo qaado dhoobada, qaabka lebiska rustic isla markiiba wuu burburin karaa jawiga. Haddii aad wax ka cabato oo ku saabsan shilalka duugga ah iyo taatikada ee suuqa ku jira, arrintan waxaan la wadaageynaa dhowr shaashad oo fudud barnaamijka, waxaa habboon in la aado soo iibsiga laba waxyaalood oo is-khilaafsan. Xaqiiqdii, qurxinta guriga ee quruxda badanaa waa midda ugu fudud.
Tiles laba jibbaaran / afar geesleyaal cadaan ah oo dhexdhexaad ah iyo kuwo dhexdhexaad ah ayaa ku habboon abuurista jawi cusub, dhalaalaya oo xeel dheer. ▼
Faylasha waaweyn ee laba jibbaaran ayaa hawo badan leh waxayna ku habboon yihiin musqulaha leh boos badan. ▼
Haddii aad jeceshahay booska cad laakiin aadan dooneynin inaad keligaa noqotid, waxaad u isticmaali kartaa qaabab kala duwan oo dusiyeen meelo kala duwan. ▼
Musqulaha madow iyo kuwa cad waxay u badan yihiin isticmaalka madow dabaqa ama saqafka. Meesha musqusha guud ahaan way yar tahay, gidaarka madow oo saafi ah ayaa ka niyad jab badan. ▼
Nadiifinta foornada cad kalabar, qeybta sare ee rinjiyeynta oo galay madow saafi ah. ▼
Cadaan + cirro ayaa ka jilicsan. ▼
Darbiga sibidhka ah ee cawl iyo caddaan + dusha sibidhka sibidhka. ▼
Foornooyinka dabaqa ah ee qaabaysan. ▼
Buluug madow iyo shaah waa qoto dheer yihiin waxayna dadka siiyaan dareen ammaan ah. ▼
Lime dhererkiisa mosaic cagaaran. ▼
Foornada qaabka miisaanka kalluunka ee loo yaqaan 'Cyan' waxay siinaysaa khayaali ah inuu ku dhow yahay badda. ▼
Qalabka buluuga ah ee buluugga ah ee kalluunka loo yaqaan 'sky buluugga' ayaa ka riyood badan oo u eg carruur, jawigan ayaa laga yaabaa inuu ku sii dhiirrigeliyo male-awaalka, dhiirrigelinta qubayska ayaa soo ifbaxaya ama waxbaa jira. ▼
Foornooyinka cad ee darbiyada iyo taararka qaabaysan ee dabaqa ayaa ah isku dhaf ammaan ah, taas oo iyaduna siinaysa dareenka muuqaalka sare-culeyska. ▼
Saamaynta muuqaalka leh ee marmarka ubaxa ee xoogga leh waxay ku habboonaan kartaa darbiga si loo sameeyo waxoogaa qurxin ah. Fiiro gaar ah u yeelo meesha cad, haddii kale waa mid aad u qasan oo carqaladeysa fikradaha nabadeed markaad qubeysaneyso. ▼
Qaababka midabada culus waxay u baahan yihiin in lagu dhexdhexaadiyo midab cad. ▼
Foornooyin midabkeedu cad yahay oo midab khafiif ah leh, iyo dusiyeen laba jibbaaran cad oo isku dhafan, kala-guurka sidoo kale waa mid dabiici ah. ▼
Dabcan, marmarka qaabaysan ee darbiga oo dhan, sidoo kale waa qurux badan yahay. Laakiin jawiga dartiis, waxaa lagugula talinayaa inaad doorato midab khafiifa. ▼
Xirmooyinka joomatari waa fududaan, dhalaalaya oo hodan ku ah naqshadeynta, sidoo kale waa ikhtiyaarro guud oo loogu talagalay marmarka musqusha.
Qaabka saddexagalka + midabka adag + jeedal madoow iyo caddaan ah. ▼
Qaab saddexagal madow, caddaan iyo cagaar ah, oo si habsami leh loogu jiheeyey isla jiho. ▼
Carqaladeyso jihada abaabulka, laakiin sidoo kale aad u qurux badan. Navy + cad-cad, xulasho midab leh oo xasilloon ▼
Qaabka joomatari ee saddexda geesood ah wuxuu hodan ku yahay casriga. ▼
Hore:: Maxay Tahay Barnaamijka Taabashada Musqusha ee 2021 ee Barnaamijku Yahay? Qaababkan, Agabkan iyo Midabbadaas, oo ay sannado kooban ku jiraan ayaanay wakhtigoodii ka dhicin! Next: Midabka Noocan oo kale ah ee horumarsan, Qolka Musqusha Runtii Hip!